हाम्रा परम्पराहरू बिज्ञान सम्मत नै छन्- भीम उपाध्याय - Supa Online
हाम्रा परम्पराहरू बिज्ञान सम्मत नै छन्- भीम उपाध्याय
२०७७ मंसिर २, मंगलवार १०:०६
बैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका नियमहरू सय वर्ष पछि पुष्टि हुदै जाने हुन सक्छन् । ऋषिहरूले पत्ता लगाएका नियमहरू हजारौँ वर्षपछि पुष्टि हुदै जाने गर्छन्। आधुनिक प्रविधि अझै बिकसित हुदै जादा सत्यता पुष्टि हुदै जान्छन्।
भीजनरी भनेकै दुरद्रष्टाहरू हुन्। तिनका कुराहरू सुदूर भविष्यसम्म पनि सत्य प्रमाणित हुदै जाने महामानवहरू हुन्। तत्कालिन समाजमा अधिकाँशले महामानवका कुरा बुझ्न सकेका हुदैनन् । अधिकॉश ती एक्लाएक्लै अगाडी बढ्ने गर्छन्। अधिकॉश दार्शनिक, बैज्ञानिक, ऋषि, बिद्वान, बुद्धिजीबीहरू संगठन बनाएर हिड्दैनन्। ती बाघ, सिंह जस्तै शिर ठाडो पार्दै छाती फुलाएर एक्लै हिड्ने गर्छन्। बुद्धिको दुनियॉ एकल दुनियॉ हुन्छ।
हाम्रा सनातन ज्ञान, प्रविधि, परम्परा र संस्कृति तत्कालिन काल र परिस्थितिमा सबै सही नै भएका हुन्। नभए अस्तित्वमा आउने नै थिएनन्। तिनका पछाडीको बैज्ञानिक आधारहरू र त्यसबाट लाभ लिन सकिने उचित विधिहरूको ज्ञान सिप हराउदै गएर केवल परम्पराका रूपमा अघि बढ्दा अपभ्रंश हुन गई पछिपछि अन्धविश्वास र अबैज्ञानिक हुन पुगेको हो। प्रत्येक ताल्चाको अलग्गै साचो हुन्छ, नभए त्यो ताल्चा नै भएन। गलत साचो प्रयोग गर्ने अनि ताल्चालाई दोष दिनु परम्पराको दोष हैन, हाम्रो कुबुद्धिको द्योतक हो।
हिन्दू सनातन प्रणाली भनेको हाम्रो जिवन भौतिक र अभौतिक हुन्छ र भौतिक शरीरले अभौतिक जिवनमा कुनै बाधा नपारोस् र जहिले पनि आनन्दित, उत्सवमय र खुशी रहन सकियोस् भनेर प्रादुर्भाव गरिएको हजारौं वर्षदेखि प्रमाणित परम्परा हुन्। समय कील परिस्थितिले तिनलाई निरन्तरता दिन सकिएन भन्दैमा गलत हुन सक्दैनन्।
जसलाई त्यसबाट लाभ लिने चाहना छ तिनले लगनशील भई साधना गर्ने गरिरहेकै छन्। तर परम्परागत ज्ञान प्रविधि विधिबाट लाभ लिन सकिने मानसिक शारीरिक एवं अधियात्मिक पूर्वशर्त भने पूरा गरिएको हुनुपर्छ। तिनका पनि उचित एम्बियन्स , प्रिकण्डिशन प्रोटोकल हुन्छन्।
हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको र हजारौँ वर्ष पछिसम्म चलिरहने परम्परा बैज्ञानिक र मानव लाभकारी नभए टिक्दै टिक्दैनथो। कुनै कुरा हजारौँ वर्ष टिकेको छ भने त्यही नै बैज्ञानिक प्रमाण भएन र?
बैज्ञानिकता भौतिक र अभौतिक हुन्छन्। अहिलेको तिब्र बिकसिक अत्याधुनिक भनिएको भौतिक विज्ञान र प्रविधि पनि योग बिज्ञानको दॉजोमा काखे बच्चा मात्र हो, उसले हुर्केर सनातन योग बिज्ञान बुझ्न अझै ५०,१०० वर्ष लाग्ने छ। तर बुझ्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन। किनभने अहिले विश्वभरि नै विलुप्त प्राचीन विज्ञानको पनि धूमधामसंग खोज हुदैछ।
ग्यालेलियो, न्युटन, आईनस्टिन, स्टेफन हकिन्सका कुरा पनि ५०,१०० वर्ष पछि मात्र प्रमाणित हुदै गएका हुन र हुदैछन्।
ऋषिहरूको कुरा त झन हजार वर्ष पछि प्रमाणित हुदै रहने छन्, जबसम्म श्रृष्टि चलिरहने छ।
हाम्रै भूगोलमा बिकसित वैदिक विज्ञानको पुनरूत्थान गर्न सकियो भने अकल्पनीय चमत्कार हुने छ आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा।
योगविज्ञानले मात्र पनि अहिले चमत्कार गरिरहेको छ। अन्य विज्ञानका कुराहरू पश्चिमा बडेबडे बैज्ञानिकहरूका प्रेरणाका श्रोत बन्दै रहेका छन्।
माल पाएर चाल नपाउनु मालको दोष हुन्छ र?
(लेखक : नेपाल सरकारका पुर्व सचिव हुन्)